« Tiako ianao fa saingy indrisy »: mivoaka anio ny DVD an’ny tarika Rainitelo | NewsMada
Sambany eo amin’ny tantaran’ny hiragasy ! Tamin’ny alalan’ny fitaovana anisan’ny raitra sy feno no nanatanterahana ny rakitsary (DVD) « Tiako ianao fa saingy indrisy » an’ny tarika Rainitelo avy any Andohavary Tarika manana traikefa matanjaka tokoa eo amin’ny tontolon’ny hiragasy. Fantatra tamin’ny fanazavana nataon’i Dadafara, mpitantana ny « LT Production » nisahana ny famokarana ity rakikira vaovao ity fa hivoaka anio izany DVD mirakitra renihira izany.
« Nahatratra 12 ny « cameras » nampiasaina… Nifanaraka tamin’izany ihany koa ny kalitaon’ny fandraisam-peo », hoy izy. Ho fanomezana lanja sy hasina ny hiragasy sy ny zavakanto malagasy ary ireo rehetra mpankafy hiragasy no nanaovana izany, raha ny nambarany hatrany. Nomarihin’i Dadafara LT Production fa anisan’ny fanamby napetraka ny hitondra fanatsarana hatrany eo amin’ny hiragasy. « Teny an-kianja mihitsy no nanaovana ny fandraisana ny feo sy ny sary fa tsy tany anaty efitrano mba hahazoana mihanoka ny hakanton’ny hiragasy sy ny fitaizana azo avy aminy », hoy izy.
Marihina fa ankoatra ny maha zavakanto ny hiragasy, anisan’ny kolontsaina nentin’ny Malagasy nanabe ny taranany izy ity, hany ka manao ezaka ny hiverenan’izany anjara andraikitra notanan’ny hiragasy fahiny izany ny LT Production sy ny Dadafara Serasera Hiragasy amin’ny alalan’ny fanapariahana ny rakitsary, tahaka izao.